OLANA AMINA TANY MIREFY 30 HA : Mponina an-jatony eny Antanandrano tandindomin-doza
Miantso vonjy amin’ny Filoham-pirenena sy ny tompon’andraikitra misahana ny fananan-tany ireo mponina eny Antanandrano. 7 juin 2021
Tany mirefy 30 ha izay ananan’izy ireo taratasy mazava no misy mibodo ankehitriny. Tandindomin-doza vokatr’izany ny fiainan’izy ireo.
Anisany raharaha tena mahazo vahana eny anivon’ny Fitsarana ankehitriny ny raharahana ady tany. Eny anivon’ny fiarahamonina dia saika mihamaro hatrany ireo mitaraina ho very noho ny fibodoan’olon-tsy fantatra ny tanin’izy ireo izay efa nipetrahana an-taonany maro. Nampitroatra ny hatezeran’ny mponina teny Antanandrano ny fikasan’ny orinasa tsy miankina iray voalaza fa ana teratany vahiny haka ny tany. Ity farany izay efa nivonona hanao fihadiana fototra saingy nosakanan’ireo mponina izany. Velaran-tany mirefy hatrany amin’ny 30 ha ity iadivana ity ary milaza ho manana ny taratasy ara-dalàna mirakitra izany ireo mpandova ny tany.
“Nikasa hiady fototra eo amin’io tany mbola misy fifandirana eto Antanandrano io ilay orinasa ny volana mey lasa teo iny. Tonga maro teny an-toerana mihitsy ary nanao hery famoretana niaraka tamin’ny mpitandro filaminana saingy tsy nanaiky hatramin’ny farany ny fokonolona sy ireo tompon-tany”, hoy ny fanazavana avy amin-dRamatoa Raketamalala Thérèse isan’ireo mpandova ny tany avy amin-dRazafimahefa sy Razafitsara. Raha sanatriavina, hoy izy, ka lasan’ity orinasa tsy miankina ity io velaran-tany tena midadasika io dia mponina an-jatony misy fianakaviana marobe no tsy manan-kipetrahana intsony ary heverina fa ho simba tanteraka ny fiainan’izy ireo. Nambarany fa efa nahazo “titre” tamin’ny taona 2005 izy ireo izay manaporofo fa azy ny tany, saingy nisy teratany vahiny nilaza fa tompon’ny tany indray taty aoriana.
Tany manan-draharaha eny anivon’ny Fitsarana
Nambaran’ny mpisolovava an’ireo mpandova ny tany, ny Me Randrefy Danielle fa mbola raharaha mandeha eny anivon’ny Fitsarana io tany io, ka tsy tokony hanaovana asa fanorenana izany mihitsy. Mahagaga anefa, raha ny voalazany, ny fahasahiana feno nananan’ireo olona mikasa haka an-keriny ny tany ny hihady fototra eny an-toerana izay midika ho fanitsakitsahana ny lalàna. “Tany tan-dalàna eto amintsika fa tsy misy ambony lalàna izany. Ankehitriny dia tratran’ny antsojay ireto mponina ary tany mbola miady ity ka tsy azo kitihina sy tsy azo anaovana na inona na inona. Misy mikasa hanao didin’ny be sandry anefa na mbola mandeha eny anivon’ny Fitsarana aza io raharaha io. Manana titre ireo tompon’ny tany ary manana taratasy ara-dalàna”, hoy ny mpisolovava, Randrefy Danielle. Efa an-taonany maro no nandalo teny anivon’ny Fitsarana ity raharahana ady teny Antanandrano ity ary nivoaka ho mpandresy hatrany ireo mpandova ny tany.
Taty aoriana anefa, tsy manaiky lembenana ity orinasa iray ity ka izao miitatra mandraka ankehitriny izao ny raharaha. “Ady tany madio io raharaha io teny anivon’ny Fitsarana ka naharesy foana izahay tompon-tany mpandova nanomboka teny amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany ka hatrany amin’ny Fitsarana an-tampony. Efa am-polo taonany mahery no nifandrirotra teny amin’ny Fitsarana ny raharaha ary saika ny 90%-n’ny valim-pitsarana dia nandresy foana izahay”, hoy ny fanazavan-dRamatoa R. isan’ireo mpandova ny tany. Voalazany fa na teo aza izany fandresen’izy ireo izany dia tsy nitsahatra ny nampihorohoro ilay mikasa haka ny tany.
Niharan’ny hatezeran’ny mponina
Mahatsiaro tena iharan’ny tsindry hazolena tanteraka ireo mponina voakasik’ity ady tany eny Antanandrano ity. Nanao izay fara-heriny izy ireo nanakanana ny fikasan’ilay orinasa hiady fototra teny an-toerana, ny alatsinainy 31 mey lasa teo. Raikitra vokatr’izany ny korontana, naneho ny tsy fahafaliam-pony ireo mponina, ka nandrodana an’ireo fefy fanitso izay efa napetraka ho famaritana ny tany mandritra ny fihadiana fototra. Naheno ny disadisa ny Solombavambahoaka voafidy teny anivon’iny boriborin-tany iny dia nidina ifotony teny an-toerana nandamina an’ireo mponina.
Nambarany fa hifandinika amin’ny Ben’ny tanàna ny tenany ary hanao fanadihadiana sy hitady izay vahaolana ho an’ny marimaritra iraisana mahakasika ity raharaha ity. “Vao nahare ny zava-nisy aho dia niantso ny Ben’ny tanàna ary nanontany ny fandehan’ity raharaha ity fa be dia be ny fitarainan’ny olona voaraiko. Nidina ifotony aho mba hanadihady anareo, hifandinika amin’ ny Ben’ny tanàna ihany koa aho mba hahafahana manapa-kevitra”, hoy ny Depiote Ratrefindrazana Jerry. Taorian’izay, nilamina ny toe-draharaha ary miandry izay fanapahan-kevitra avy amin’ireo manam-pahefana eny ifotony ireo vahoaka.
Miantso vonjy amin’ny Fitondram-panjakana
Anisan’ireo fanamby napetraky ny Fitondram-panjakana ankehitriny izay tarihin’ny Filoha Andry Rajoelina ny hisian’ny mangarahara indrindra amina raharaha ady tahaka izao. Ny tenany izay nanindry mazava fa tsy manaiky ny tsindry hazo lena atao amin’ireo vahoaka madinika. Eo anatrehan’izany indrindra no iantsoan’ireo tompon’ny tany sy ireo mponina eo amin’ity tany eny Antanandrano ity vonjy amin’ny Fitondram-panjakana. “Manao antso avo amin’ny Fitondram-panjakana izahay vahoaka madinika ary miantso manokana ny Filoham-pirenena sy ny tompon’andraikitra isan’ambaratongany mba hijery akaiky ity raharaha halatra tany ety Antanandrano ity”, hoy hatrany ireo mpandova. Mahatsiaro tena ho atody miady amim-bato ihany izy ireo manoloana ity raharaha ity. Ny mpisolovava azy ireo izay nanindry fa manana ny taratasy ara-dalàna manamarina fa tompon’ny tany ireto olona mitonona ho mpandova ireto. Tsy mbola nisy ihany koa fivarotana na fifampivarotana tany nataon’izy ireo. “Miantso izay tompon’andraikitra voakasik’izao raharaha izao izahay mba hijery akaiky izany”, hoy ny Me Randrefy Danielle.